Wararkii ugu dambeeyay diyaaradda ku burburtay Garoonka Dhoobley | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay diyaaradda ku burburtay Garoonka Dhoobley
Wararkii ugu dambeeyay diyaaradda ku burburtay Garoonka Dhoobley
Diyaaradan oo uu leeyahay Militariga Kenya ayaa xalay ku burburtay Garoonka Diyaaradaha Dhoobley, xilli ay isu diyaarineysay inay dib ugu laabato dalka Kenya.
Diyaaradda ayaa cilad ku timid, xilli ay ka duuleysay Garoonka Dhoobley, waxayna ku soo dhacday meel aan sidaas uga fogayn garoonkaasi, sida uu xaqiijiyay Korneyl Charles Imbiakha, Afhayeenka Ciidanka Amisom.
“Inta aan ka ogahay diyaaradda waxay ku guda jirtay hawlaheedii caadiga ahaa, oo waxay waraaqo geyneysay Magaalada Dhoobley, markii ay Kenya ku soo laaban laheyd oo garoonka ka soo duuleysay ayay cilad ku timid, waxayna ku dhacday meel u dhow Garoonka Dhoobley.” Ayuu yiri Afhayeenka oo la hadlay BBC.
Afhayeenka ayaa beeniyay in dhaawacyo culus uu shilkaasi ka soo gaaray duuliye-yaashii diyaaradda iyo Ciidankii Militariga Kenya, ee diyaaradda saarnaa.
“Tobankii askari ee saarnaa diyaaradda ayaa dhammaantood bad-qaba, qaarkood waxaa soo gaaray dhaawacyo fudud, waana laga dabiibay, xaaladooduna way fiican tahay, oo waa ay nabad qabaan.” Ayuu yiri Afhayeenka
Charles Imbiakha ayaa sidoo kale sheegay in khubaro militari loo diray Dhoobley, si ay baaritaano ugu soo sameeyaan waxa sababay burburka diyaaradda laga leeyahay dalkaasi Kenya.
“Haataan oo aan kula hadlayo waxaa Dhoobley ku sugan koox ka socota Ciidanka Difaaca Kenya ee KDF, kuwaa oo isku deyaaya inay ogaadaan waxa sababay burburka diyaaradda.” Ayuu yiri Korneyl Imbiakha.
Diyaaradan ayaa noqoneysa tii ugu dambeysay ee dalka ku burburta, ka dib shilal is xig xigay oo billihii ugu dambeeyay ka dhacayay garoomada ku yaala Gobolada Koonfurta & Bartamaha Somaliya.